Umaki: i-collabspot | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 3, i-2020 Lwesibili, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
Izinhlelo zokuphathwa kwamaphrojekthi eziku-inthanethi ziguquke zaba amapulatifomu wokubambisana komphakathi, kufaka phakathi ukusakazwa kwemisebenzi, imisebenzi, ukuhlela, ukuphathwa kwemibhalo nokuhlanganiswa kohlelo lwangaphandle. Le yimboni ethuthuka ngokushesha futhi kunabadlali abaningi embonini. Sizame ukukhomba abadlali abaphezulu emakethe yesikhulumi sokuxhumana nomphakathi lapha! I-Azendoo - Hlela, uhlele, uhlanganyele futhi ulandele umsebenzi weqembu lakho endaweni eyodwa. I-Bizzmine - Ipulatifomu yokuhamba komsebenzi ye-Flexible yokwenza lula izinqubo zebhizinisi lakho. Ukuqhuma komlilo
IPlaxo ibilokhu iyithuluzi eliwusizo ngokumangalisayo isikhathi esithile futhi iqhubeka nokuba ngcono. Emasontweni ambalwa edlule, ngishaye iselula yami emnyango wemoto. Bekushaya kahle, kuhlukaniswa ifoni izingcezu zomzimba ezi-2. Ngithole ifoni entsha (thola umshwalense njalo!) Ngosuku olulandelayo kodwa ngangilahlekelwe yincwadi yami yamakheli. Ngenze ukusesha okusheshayo kwezicelo zikaVerizon ngathola ukuthi banePlaxo njengo